Ch 11 Matthew – 2kalluunka
Home / Kitaabka Quduuska ah / Injiilka Matthew / Ch 11 Matthew
11:1 Oo waxaa dhacday in, Ciise goortuu dhammeeyey bara-tobankii xertiisa, ayuu tegey halkaas ka si ay u baro oo ku wacdiyo magaalooyinkooda.
11:2 Goortii Yooxanaa maqlay, oo xabsi ah, ku saabsan shuqulladii Masiixa, diraya laba xertiisii ​​ah, wuxuu ku yidhi isagii,
11:3 "Miyaad tahay kan imanaya, ama waa in aan ka filan kale?"
11:4 Markaasaa Ciise, ka jawaabidda, wuxuu iyagii ku yidhi: "Taga oo Yooxanaa uga warrama waxaad ku maqleen oo ay arkeen.
11:5 Eeg indha la ', kuwii lugahala'aana way socdaan, qabayna waa la nadiifiyey, dhegahala'aana wax bay maqlaan, kuwii dhintay la sara mar kale, masaakiinta injiilka waa lagu wacdiyaa.
11:6 Waxaa barakaysan kan ayaa helay dambiga iguma. "
11:7 Markaasuu, ka dib markii ay ka tageen, Ciise wuxuu bilaabay inuu dadkii badnaa wax uga sheego Yooxanaa: "Maxaad u baxaan inay cidlada si aad u aragto? cawsduur dabaylu ruxayso?
11:8 Sidaas daraaddeed waxay ahayd inaad soo aragtaan? Nin dhar jilicsan? Bal eeg, kuwa dhar jilicsan qaba waxay joogaan guryaha boqorrada.
11:9 Markaas waxay ahayd inaad soo aragtaan? Nebi? Haa, Waxaan idinku leeyahay,, iyo mid nebi ka sarreeya.
11:10 Waayo, kan waa, kuwaas oo u qoran tahay: Bal eeg, Waxaan hortaada soo dirayaa Angel, Kan jidkaaga ku sii diyaargarayn doona hortaada.
11:11 Runtii waxaan idinku leeyahay, ka mid ah kuwa dumar ka dhalatay,, waxaa ka dhalatay, mid Yooxanaa Baabtiisaha ka weyn ma jiro ee. Oo weliba kan ugu yar boqortooyadii jannada yar ayaa ka weyn.
11:12 Laakiin tan iyo wakhtigii Yooxanaa Baabtiisaha, ilaa haatan, boqortooyada jannada ayaa rabshado, oo kuwii xoogayna ayaa waxay ku qaadan.
11:13 Waayo, nebiyadii iyo sharcigu waxay wax sii sheegeen, iyo tan iyo xataa John.
11:14 Haddii aad doonaysaan inaad tan aqbashaan, Kanu waa Eliyaas ah, kan iman lahaa.
11:15 Kan dhego wax lagu maqlo, ha maqlo.
11:16 Laakiin waxa aan qarnigan u ekaysiiyaa? Wuxuu u eg yahay carruur suuqa fadhida oo,
11:17 kuwaas oo, yeer-yeeridda saaxiibbadood, odhan: "Waxaan ciyaarnay music aad u, oo waad cayaari weydeen,. Waxaan u baroortay, oo ma aad barooran. "
11:18 Waayo, Yooxanaa waa yimid isagoo aan waxba cunaynin oo cabbaynin; oo iyana waxay igu odhan, "Jinni buu qabaa."
11:19 Wiilka Aadanahu waa yimid isagoo wax cunaya oo wax cabbaya; oo iyana waxay igu odhan, Bal eeg, nin voraciously la cunaa oo la cabbaa khamriga, oo saaxiib la ah cashuurqaadayaal iyo dembilayaal. 'Laakiin xigmaddii xaq ku wiilasheedii. "
11:20 Dabadeed wuxuu bilaabay inuu canaanto magaalooyinkii oo badan oo ah mucjisooyinka uu dhammaatay, waayo, iyagu weli uusan u qoomamoon.
11:21 "Waa idiin hoog,, Khorasinay! Waa idiin hoog,, Beytsayda! Waayo, haddii mucjisooyinka in laydinku dhex sameeyey lagu samayn lahaa, in Turos iyo Siidoon, ay toobad keeni lahaayeen, ka hor in joonyad ah gashan oo dambas ku.
11:22 Oo weliba sida runta ah, Waxaan idinku leeyahay,, Turos iyo Siidoon waa la cafiyi doonaa idinka sii badan, on maalinta xisaabta.
11:23 Oo waa inaad, Kafarna'um, in aad la sarraysiin jidka loo samada oo dhan? Oo waa inaad soo dagno jidka Jaxiimo oo dhan. Waayo, haddii mucjisooyinka la lahaa oo lagugu dhex sameeyey, Sodom lagu, laga yaabee way joogi lahayd, ilaa maantadan la joogo.
11:24 Oo weliba sida runta ah, Waxaan idinku leeyahay,, in dalka Sodom ayaa la cafiyi doonaa idinka sii badan, on maalinta xisaabta. "
11:25 Wakhtigaas, Ciise baa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi: "Waxaan aad qirtaan, Aabbaha, Eebaha Cirka iyo dhulku waa, maxaa yeelay, idinku wax ka qarisay caqliga iyo garashada leh ka, oo waxaad u muujisay in yaryarkan.
11:26 Haa, Aabbaha, waayo, taasu waxay ka farxisay aad ka hor.
11:27 Wax walbaba waa ii dhiibay; Aabbahay. Oo ninna Wiilka garan maayo Aabbaha maahee, ma qof Aabbaha, Wiilka maahee ogaado, iyo kuwii Wiilka ayaa doonaya inuu u muujiyo.
11:28 Ii kaalaya, kulligiin kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow lagu, oo waxaan idiin nasiyey doonaa.
11:29 Qaado Harqoodkayga dushiinna, oo wax iga barta, waayo, waan qaboobahay iyo camalka qabow ee wadnaha; oo aad ka heli doonaan naftiinna nasashaad u.
11:30 Waayo, harqoodkaygu waa macaan oo rarkayguna waa fudud yahay. "